မှားတဲ့ဘက်မှာ ရပ်ခဲ့သူ ဂျွန်သင်ဇမ်း (သို့မဟုတ်) ချင်းတောင်တန်းပေါ်က တေးသမားတစ်ယောက် – Buanchukcho
မှားတဲ့ဘက်မှာ ရပ်ခဲ့သူ ဂျွန်သင်ဇမ်း (သို့မဟုတ်) ချင်းတောင်တန်းပေါ်က တေးသမားတစ်ယောက်
” ဝလုံးကလေးမှ ဝိုင်းအောင်မရေးနိုင်ခင် ရွှေလင်ပန်းနဲ့ ထမင်းဆီဆမ်းရယ်၊ အမေဆိုပြလိုက်တော့ ရွှေသားအတိပြီးတဲ့ လင်ဗန်းကြီးပဲ မက်မောကာ ငါဟာ လောဘ တက်လာတယ် . . . ”
ဖလမ်းမြို့နယ် လုမ်းဘန်ရွာသား ဂျွန်သင်ဇမ်းသည် စတူရီယိုခေတ်ဦး တေးရေးတေးဆိုအဖြစ် အောင်မြင်ခဲ့သည့် ချင်းတိုင်းရင်းသားတစ်ဦး ဖြစ်သည်။
ချင်းတိုင်းရင်းသားအဆိုတော်များအနက် ဆလိုင်းဆွန်ကျဲအို၊ ဆလိုင်းသွှအောင်၊ ဂျွန်သင်ဇမ်း၊ ဆလိုင်းသျှန်းလျန် တို့က ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် ခေတ်တစ်ခေတ် ဖြစ်ခဲ့ကြသူများ ဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်းလေးဆယ်ခန့်က မြန်မာနိုင်ငံရှိ ချင်းလူမျိုးများတွင် ဗမာစကားဖြင့် သီချင်းရေးဖွဲ့ သီဆိုသူ အလွန်ရှားပါးနေသောအချိန်၌ ဂျွန်သင်ဇင်းသည် မြန်မာ့ဂီတလောကတွင် လူအများလက်ခံရသည့် အနုပညာရှင်တစ်ယောက်အဖြစ် အောင်မြင်ခဲ့သည်။
အတွေးလှလှ အရေးလှလှဟု ဆိုရအောင်ပင် သီချင်းများကို သူ့အမြင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်း၊ မာယာကင်းကင်းဖြင့် ရေးဖွဲ့တတ်သူ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝပြီး လှပသည့် စာသား၊ သံစဉ်များဖြင့် အောင်မြင်သည့် တေးသီချင်းများစွာကို ရေးစပ်နိုင်ခဲ့သူလည်း ဖြစ်သည်။
ဂျွန်သင်ဇင်းကို ၁၉၅၁ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ချင်းပြည်နယ် ဖလမ်းမြို့နယ် လုမ်းဘန်ရွာ၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။
ဖခင်မှာ ဗိုလ်ကြီးသင်ဇမ်းဖြစ်ပြီး ချင်းပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေး၊ ချင်းဦးစီးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ မိခင်မှာ ဒေါ်ထန်တီးအယ်လ်ဖြစ်ပြီး မွေးချင်း ၁၁ ယောက်အနက် ၁၀ ယောက် မြောက်သား ဖြစ်သည်။
ပညာရေးအနေဖြင့် လေးတန်းအထိ လုမ်းဘန်ရွာ(စိန့်ဂျိုးဇက်ကွန်ဗင့်ကျောင်း)၊ ငါးတန်းကို ကလေးမြို့ စိန့်မေရီကျောင်း၊ ခြောက်တန်းကို လုမ်းဘန်ရွာ(အစိုးရကျောင်း)၌ သင်ကြားခဲ့ပြီး ခုနစ်တန်းမှ ဆယ်တန်းအထိ ရန်ကုန်မြို့ အထက(၁)ဒဂုံမှာ သင်ယူခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ ဘူမိဗေဒဘာသာရပ်ဖြင့် ၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင် ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။
သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ဆလိုင်းသွအောင်နှင့် ပူးတွဲရေးသားသည့် ” တဲအိုပျက်မှာ မနေစေချင် ” သီချင်းကို ဆလိုင်းဆွန်ကျဲအိုက စိုင်းထီးဆိုင်နှင့်အတူ တေးစီးရီးတစ်ခု၌ သီဆိုခဲ့သည်။ ထိုသီချင်းသည် သူတို့အတွက် ဂီတလောကကို စတင်ဝင်ရောက်စေခဲ့သည့်သီချင်းဖြစ်သည်။
” နာမည်ဆန်းတဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်၊ အလွမ်းကဖီးလို့ ပေးထားတယ်၊ မင်းနဲ့တို့နှစ်ယောက်အတူ အမြဲသောက်တဲ့ ဒီဆိုင်လေး × × × ဆိုင်ရှင်ဦးနဲ့ ရင်းနှီးကာ ကိုယ်တို့နှစ်ဦး အတွဲလေးရောက်ရင် တို့ကြိုက်တဲ့ သီချင်းတွေ အလိုက်တသိနဲ့ ဖွင့်ပေးတယ်လေ . . . ”
ထိုသီချင်းမှာလည်း ယနေ့အထိ လူကြိုက်များဆဲ ဂျွန်သင်ဇမ်း၏ လက်ရာကောင်း သီချင်း ဖြစ်သည်။
အလွမ်းကဖီးအပြင် လူပျိုကြီးပဲ လုပ်တော့မယ်၊ တောင်ဇလပ်ပင်အောင်က သဇင်ချစ်သူ၊ အိမ်ပြန်ချိန်၊ စသည့်သီချင်းများမှာလည်း ထင်ရှားသည်။
စောဘွဲ့မှူးရေးသားပြီး ဂျွန်သင်ဇမ်း သီဆိုအောင်မြင်ခဲ့သည့် မှားတဲ့ဘက်မှာ နေကြည့်မယ်၊ ပဲ့ကိုင် စသည့် သီချင်းများမှာလည်း ယနေ့အထိ လူကြိုက်များနေဆဲ ဖြစ်သည်။
” သီချင်းအားလုံးဟာ သူ့ဟာနဲ့သူ လှကြတာချည်းပဲလို့တော့ ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာမှ Blue, Jazz, Classical တွေကို ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ပိုကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ရေးဖွဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ သီချင်းတွေကတော့ Country, pop, Rock သီချင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ် ”
ဂျွန်သင်ဇမ်း အသက် ၆၃ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် RFA သတင်းဌာန ချင်းဘာသာအစီအစဉ်၌ တင်ဆက်ခဲ့သည့်ရုပ်သံတစ်ခု၌ သူပြောခဲ့သည့်စကား ဖြစ်သည်။
ဆလိုင်းသွှအောင်၊ ဆလိုင်းသျှန်းလျန်၊ ဖိုးချိုတို့နှင့် တွဲဖက်ပြီး အတွဲခွေများ၊ တစ်ကိုယ်တော်အယ်လ်ဘယ်များ အပါအဝင် တေးစီးရီးပေါင်း ၁၀ ခုခန့် ထုတ်လုပ်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။
” ကျွန်တော် သဘောကျနှစ်ခြိုက်တဲ့ အနုပညာရှင်တွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာမှ လိဒ်ဂီတာမှာဆိုရင် စောဘွဲ့မှူး၊ ဇော်မျိုးထွဋ်(Mizzima)၊ ညီညီ၊ ဘေ့စ်မှာဆိုရင် ဆလိုင်းဇာလျန်း၊ ကီးဘုတ်မှာ လီယိုနဒ် မောင်မောင်လွင်၊ ဘော်စကိုကင်မ်၊ ဒရမ်မှာဆိုရင် အော်စကာသန်းတင် တို့ဟာ ကျွန်တော်ကြိုက် နှစ်သက်တဲ့ ဂီတသမားတွေ ဖြစ်ကြပါတယ် ” ဟု အထက်ပါ အင်တာဗျူး၌ သူဖြေဆိုခဲ့သေးသည်။
ယင်းအပြင် ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ ချင်းလူမျိုးများသည် ခရစ်ယာန်ဓမ္မသီချင်းများကိုသာ ရေးသားထုတ်လုပ်လေ့ရှိပြီး အချစ်သီချင်းများ နည်းပါးသည်ဟု သူက မြင်သည်။ ထို့ကြောင့် ချင်းလူငယ်များအနေဖြင့် ချင်းလိုပဲဖြစ်စေ၊ ဗမာလိုပဲဖြစ်စေ အချစ်သီချင်းများ၊ အမျိုးသားရေးသီချင်းများကို များများရေးဖွဲ့ကြရန်လည်း သူက တိုက်တွန်း ထားသေးသည်။
ယခုနောက်ပိုင်း သူ့လက်ရာများဖြစ်သည့် မအိုတဲ့အချစ်၊ ဖန်ခွက်ထဲက ငွေလမင်း၊ ကမ္ဗည်းတို့မှာလည်း တေးချစ်သူများ အကြား ခံစား၍ရနိုင်သည့် သီချင်းများ ဖြစ်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးထုတ်လုပ်ခဲ့သည့် ခေါင်ရည်သောက်တဲ့ မိုးတိမ်များ (၂၀၁၃)အယ်လ်ဘမ်မှ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ ပို၍ ထင်ရှားခဲ့သည်။
သူ့ဇာတိရွာအကြောင်း ဖွဲ့ဆိုထားသည့် လုမ်းဘန် အမည်ရှိ သီချင်း ဖြစ်သည်။ ဇာတိရွာ၏ နွေမိုးဆောင်း သာယာလှပပုံနှင့် ရိုးရာဓလေ့များအကြောင်းကို ဖွဲ့ဆိုထားခြင်းက နားဆင်သူတို့ကို နှစ်ခြိုက်စေခဲ့သည်။
ဂျွန်သင်ဇမ်း၏ မိသားစုအကြောင်း သေချာမသိရသော်လည်း သားသမီးငါးဦး ရှိသည်။ သားဖြစ်သူ ဟန်နွေဦးမှာလည်း တေးသီချင်းများကို ကိုယ်တိုင်ရေးသားသီဆိုမှု ပြုနေသူ ဖြစ်သည်။
ဂျွန်သင်ဇမ်းနှင့် မိသားစုဝင်အချို့သည့် ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရပြီးနောက် လွန်ခဲ့သည့် တစ်လခန့်မှစတင်ကာ ရန်ကုန်မြို့ အင်းယားစင်တာတွင် ကုသမှု ခံယူခဲ့ရသည်။
ကိုဗစ်ရောဂါ ခံစားရင်း ဇူလိုင်လ ၁၈ရက်တွင် လူမှုကွန်ရက်ပေါ်၌ စာတစ်ချို့ကို သူ ရေးသားခဲ့သေးသည်။ ထိုစာများသည် သူ၏ နောက်ဆုံး တေးလက်ရာများအလားပင်။
” ရက်စက်လွန်းတဲ့ တိမ်မဲညိုတွေကြား ကြယ်ပွင့်အိုလေး မောဟိုက်နွမ်းနယ်စွာ လက်မလျော့စတမ်း လက်ပစ်ကူးခတ်နေတယ်။ ဒီ တိမ်မဲညိုတွေကြး ဘဝတူကြယ်ရွယ်စုံတွေလည်း မျှော်လင့်ချက်အပြည့်နဲ့ ကူးခတ်နေကြရှာတယ်။ ကူးခတ်ရင်း ကြွေသူတစ်ချို့ကို မမြင်ရက် မြင်လိုက်ကြရတယ်။
သာယာလှပတဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို ဖျက်စီးရက်တဲ့ လက်ယုတ်မာတွေ လူသားချင်း စာနာရကောင်းမှန်းမသိကြတဲ့ လူ့မိစ္ဆာတွေ အမြန်ဆုံး မျိုးပြုတ်ပါစေ။
လူသားအားလုံးအတွက် ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းပေးခဲ့တဲ့ သဘာ၀ O2 ကို လူသားအားလုံး အမြန်ဆုံး ၀၀လင်လင် ပြန်ရှုခွင့် ရရှိနိုင်ကြပါစေ။ မိစ္ဆာတိမ်မဲညိုတွေကို အနိုင်မခံ အရှုံးမပေးတဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ ထိုးဖောက်ကြပါစို့လား။
လွတ်မြောက်သွားကြသူတွေအတွက် ဝမ်းသာတယ်။ ကူးခတ်နေဆဲသူတွေအတွက် အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်ကြပါစေ။ ဘုရားရှင်မှ ကူညီစောင်မတော်မူပါစေ။ ဆုတောင်းပေးခြင်းဖြင့် မိမိမိတ်ဆွေတွေရဲ့ အသက်ကို ကယ်တင်ကြပါ။
မိတ်ဆွေအားလုံး FIGHTING !!! ”
ထိုသို့ ကုသမှုခံယူနေရင်း ၂၀၂၁ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့ ညနေ ၅ နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင် ကွယ်လွန်သွားခဲ့သည်။ လာမည့် သြဂုတ်လ (၂၅)ရက်မှာတော့ သူ့မွေးနေ့ဖြစ်ပြီး အသက် ၇၀ ပြည့်မြောက်ပြီ ဖြစ်သည်။
” ဂီတလောကမှာ ပေကပ်ကပ်နဲ့ ရှိနေခဲ့တာ ခုဆို ၄၁ နှစ် ရှိသွားပြီ။ ဂီတာကို နားလည်တတ်ကျွမ်းလို့ မဟုတ်ဘဲ ဇွတ်ချစ်မိသူဘဝနဲ့ ဂီတလောကမှာ ရှိနေခွင့်ရတဲ့အတွက် ဝမ်းသာနေမိတယ်။ သီချင်းအဝင်အထွက်၊ အဖြတ်အတောက် နားမလည်ဘဲ သီချင်းတွေ သီဆိုခဲ့တယ်။
နှစ်ပေါင်း ၄၁ နှစ် ဖြတ်သန်းမှ ဂီတအကြောင်း ရေးတေးတေးလေး သိရတယ်။ သင်ပေးမယ့်သူ၊ လမ်းညွှန် ပေးမယ့်သူ၊ အကြံပေးမယ့်သူ မရှိခဲ့တော့ အထစ်ထစ် အငေါ့ငေါ့နဲ့ပဲ သီချင်းတွေ ဖန်တီး သီဆိုခဲ့ရတယ်။ ခုထိလည်း ရှာဖွေလေ့လာ သင်ကြားနေရဆဲပါ။
ဂီတနတ်သမီးကို မြတ်နိုးတဲ့စိတ်နဲ့ ဒီနေ့အထိ အတင်းဖက်တွယ်နေရင်း လူလည်း အိုမင်းလို့ လာပါပြီ။ ကိုယ်သေမှပဲ လွှတ်ချနိုင်မယ်ထင်ပါရဲ့။ ဂီတဟာ နတ်ကြီးပါတယ် ” ဟု ဇူလိုင်လအတွင်းက သူ့ခံစားချက်ကို လူမှုကွန်ရက်တွင် ဝေမျှခဲ့သေးသည်။
ယခုမူ ဂျွန်သင်ဇမ်းက မရှိတော့။ သူ့မွေးနေ့ကို လုမ်းဘန်တွင် ဆင်နွှဲရန် အပြေးပြန်သွားခြင်းလော။
” လုမ်းဘန် . . . သဘာဝရဲ့ အလှတရားတွေနဲ့ ထာဝရစိမ်းလန်းပါစေ ”
မြတ် နွေ ဦး
ပဲခူးမြို့ NLDပါတီ အလုပ်အမှုဆောင်အပါအဝင် ၃ဦးကို စစ်ကောင်စီအကြောင်းမဲ့ ဖမ်းဆီး
PDF နှင့် NUG ကို ဆန့်ကျင်ရန် စစ်ကောင်စီက လူထုအကြားလိုက်လံကြေညာ